डिपोमा चामल नपाएपछि आशु झार्दै घर फर्किन जुनकला ! — Himali Sanchar
डिपोमा चामल नपाएपछि आशु झार्दै घर फर्किन जुनकला !
चामल नपाएपछि सिस्नोले छाक्क टार्छन हिमाली गाँउपालिकाका बासिन्दा ।
बाजुरा, १४ चैत : हिमाली गाँउपालिका २ बिच्छँयाकी जुनकला बुढा चामल किन्न दुईदिन लगाएर कवाडी डिपोमा पुगिन्, तर त्यहाँ एकदाना पनि चामल नपाएपछि आशु झार्दै घर फर्कीन । ५ जनाको परिवार रहेको जुनकलाका बुवा बिरामी छन्, भने आमा अशक्क्त रहेकी छन् ।
चामल नपाएपछि कवाडी बजारमा रुदै भनिन्, आमा र बुवा आउन सक्नु भएन, म आए, तर चामल नपाएर रितो हात घर जानु परेको वताईन् । चामल किन्ने पैशा पनि गाँउमा मासिक सयकडा ५ रुपैया साँहु बाट रिन मागेर ल्याएको थियो । तर चामल नपाँएको दुखोसो पोखिन् । कोल्टी पुग्न अझै एकदिन लाग्छ, केटी मान्छे बास बस्नु पर्छ आफु जान नसक्ने वताईन् ।
जुनकला जस्तै धर्मा बुढा पनि चामल नपाएर घर फर्किन् । धर्माले श्रीमान ज्यालादारी काम गर्न गएका छन्, आफु चामल किन्न आए तर नपाएपछि रित्तो हात घर जानु परेको वताईन् । अध्यारो मुख लगाउदै कवाडी बजारमा भनिन्, हाम्रो लागि सरकारले पनि कस्तो वेवास्ता गरेको पैशा छ, तर चामल किन्न नपाएको वताईन् । छोराछोरीलाई त पुर्‍याउन सक्दैनौ, आफुहरु भने कुनै दिन भोकै बस्नु परेको जुनकलाले वताईन् । अब चामल नपाएपछि सिस्नोले छाक्क टार्ने उनले वताईन् ।
बिच्छँयामा मात्र ४ हजार जनसंख्या रहेको छ, सबै घरमा खाद्य संकट भएको वताए । स्थानिय उत्पादनले बर्षमा दुई महिना पनि खान नपुग्ने गरेको छ । हिमाली गाँउपालिका बाजुराको सर्वाधिक बिकट गाँउपालिका हो, यो गाँउपालिकाको टाढाको गाँउ पुग्न सदरमुकाम मार्तडी बाट एक साता लाग्ने गरेको छ ।
कवाडी डिपोका लागि खाद्य संस्थान बाजुराले यो बर्ष मात्र ६ हजार कुन्टल चामलको कोटा स्वीकृत गरेको छ । सोही अनुसार ३ जना ठेकेदारले असोज महिनामा सम्झौता गरेको हो, तर अहिले सम्म १५ सय कुन्टल मात्र पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाजुराले जनाएको छ ।
३ हजार कुन्टल नन्द महतारा, १ हजार बल बहादुर थापा र २ हजार नरि थापाले ढुवानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । बल बहादुर थापाले असोज १८, नरी थापाले असोज १६ र नन्द महतराले असोज ७ ढुवानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
यौन हिंसा कम गर्न आत्मरक्षा तालिमको आयोजना
इलाममा गोरु चोरेर काट्ने २ जना पक्राउ